INTEE IN LE'EG AYAAD KU HAYN KARTAA BORIC ACID DHEGAHA IYO SIDA LOO HABOON YAHAY IN LAGA DHIGO CAWSKA SUUFKA SUUFKA IYO TAMPONS EE FAASHAD AMA FAASHAD DHIIG AH DHEGTA? - WIXII MARTIDA
Dhabarka Boric-ga ee dhegta waxaa loo isticmaalaa qiyaastii qoys walba, haddii qof qoyska ka mid ahi uu dhibaato ka qabo dhegta. Si loo sameeyo daaweynta dhagaha xanuun habeenkii, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo turndochki - kuwani waa suufka qoyan oo qoyaan leh alkol boric. Tani waa hab aad u haboon oo kalsooni leh.
Isticmaalka boron acid acidic acid waa mid ka mid ah hababka ugu caamsan ee daaweynta cudurada dhegta. Xaaladahee farsamadani waxaa loo adeegsadaa, maxay tahay farqiga udhaxeeya maqaalkani si aad u sahlan sahlan ee daroogada ee dhegta, waa maxay tartanka?
Ereyga "turunda" waxaa laga soo qaatay tartanka Laatiin, taas oo macnaheedu yahay dharka.
Turunda ee daawada waa suufka yar yar ee suufka ah ama tampon-ka ee loogu talagalay in lagu galo meelo badan oo adag oo gaaraya jirka.
Fikradda meelo adag oo la gaari karo waxaa ka mid ah:
nabarka nadiifka ah;
Caleemaha dibedda ah waa calamadda caleenta ah ee lagu dhejiyo faashad ama dhogor. Farmashiyadu waxay iibiyaan alaab la diyaariyay oo nadiif ah, laakiin haddii ay lagama maarmaan noqoto, waxaa loo samayn karaa si madax-bannaan.
Turunda ee dhegta, marka la barbardhigo diiqad sahlan, waxay leeyihiin faa'iidooyinka soo socda:
Daawada oo caloosha laga qooyay kama soo baxdo dhegta.
Xitaa xitaa qaybinta walaxda firfircoon ee kanaalka dhegta.
Muddada dheer ee tallaalka.
Helitaanka daawooyinka iyo qiimaha hooseeya.
Faa'iidooyinka ku jira habkan waxaa ka mid ah halista waxyeellada xuubka xuubka oo leh khaladka khaldan ee calanka. Intaa waxaa dheer, waxaad dhaawici kartaa maqaarka jilicsan ee kanaalka dhegta. Haddii kaliya qayb ka mid ah suufka ama tamponka bukaanku weli ku dhegsan yahay dhegta muddo dheer, waxay keeni kartaa caabuq iyo dhibaatooyin halis ah.
Maxay yihiin farqiyada u dhexeeya cadaadiska iyo qaboojinta?
Turunda loogu talagalay otis aan cillad lahayn ayaa ah hab aad u fudud oo si nabadgelyo ah uula qabsan kara cudurka, marka la barbar dhigo daawada daroogada dhegaha.
Marka la qaboojiyo, dareen xanuun badan ayaa dhici kara - cuncun, xoqan ama gubasho, taas oo dhacaysa dhowr daqiiqadood. Marka aad isticmaasho timundum, xanuunkaas oo kale waa maqnaansho.
Isku-dhafka leh boric acid, oo ka soo horjeeda cayayaanka oo leh daawo isku mid ah, waa habka kuleylka iyo xanuunka. Ma jirto xiriir toos ah ee daroogada leh maqaarka jilicsan ee maqalka iyo xuubka dhegta, iyo saameynta daaweynta waxaa sababa kulaylinta gudaha ee dhegta.
Inkastoo inkastoo cadaadisku uu yahay hab xagjirnimo oo yar oo daaweyn ah marka loo eego hirgelinta turunka ama qaboojinta, waxay fududeyn kartaa habka cudurku u yareeyo xanuunka xanuunka.
Habkee iyo goorma ayaad dooran kartaa?
Dhammaan siyaabaha siyaabaha loo isticmaalo qamriga boriciga ee otomaatikada, kicinta, Cabbitaanka kuleylka iyo tartiib tartiibta dhegta - waxay leeyihiin calaamado caafimaad oo kala duwan. Sidaa darteed, kahor intaadan arjigaan habka daaweynta guriga, waa inaad had iyo jeer la tashataa takhtar. Kaliya khabiir ayaa go'aamiya xaqiiqda ah in isticmaalka boric acid uu ku habboon yahay kiiskaaga gaarka ah.
Dareemidda dhegta waxaa loo isticmaalaa cudurada dhegaha ee aan habooneyn. Cabbiraadda boricirka ee feejignaanta saddex-boqolkiiba waxay burburisaa mikroflora bakteeriyada cudur-sidaha oo diirada saaraya caabuqa, waxay xoojisaa difaaca deegaanka. Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah waa maqnaashaha xuubka dhegta.
Baqshiinka khamriga ah ee la isku daro waxaa lagu tilmaamaa otis dibedda ah, iyo weliba waraaqaha otomaatiga ee xaaladaha ba'an ama dabadheeraad ah. Duufaantu waxay ka caawisaa kor u qaadida heerkulka maxaliga ah iyo soosaarida neutrophils in la burburiyo wakiilada cudurka.
Dhakhaatiirta qaarkood ma ogolaanayaan inay cadaadis noqdaan sida daweyn loogu talagalay cudurada dhegaha oo u oggolaanaya in kuleylka u kiciyo oo keliya hal nidaam, haddii uu jiro xanuun iyo dhibaato ka jirta helitaanka daryeel caafimaad oo degdeg ah.
Qodob-dhafid dabacsan oo loogu talagalay hawo-qaboojinta kululaynta:
hannaanka firfircoon ee firfircoon;
furunculosis ee wajiga;
iyo sidoo kale heerkulka jidhka oo kordhay.
Ku guuldareysiga inaad u hoggaansamato shuruudahan waxay sii xumayn kartaa geedi socodka neefsiga iyo xataa xitaa dillaacsanaanta xajinta.
Turunda oo la gooyey khamriga boriciga, ku rid kiiska marka ay jiraan shaki ku saabsan sharafta jiritaanka xuubka.
Isla mar ahaantaana muddo dheer ayaa saameyntu kululeeyaa waa la ilaaliyaa oo xuubka ayaa hoos u dhacda. Tilmaamaha loo isticmaalo waa isku mid ah: oogada oo aan wax dhib ah lahayn ee dhegta dhexe, iyo sidoo kale jiritaanka boogaha xiidmaha dhegta.
Goorma ayay iska dhigaan?
Turunda leh alkol boriciga dhegaha waa wax aan la aqbali karin kiisaska soo socda:
Da'da cunuga waa in ka yar 3 sano;
dulqaad shakhsiyadeed oo shakhsiyadeed;
Tilmaamaha tallaabo tallaabo ah ee sameynta
Marka aad guriga joogtid, waxaad ka dhigi kartaa turund alaabta kala duwan - suufka, suufka, faashad ama faashad. Dhibaatooyinka oo dhan waxaa lagu sameeyaa qalab nadiif ah iyo gacmo nadiif ah.
Sida loo sameeyo calafka laga bilaabo dhuxul?
Qaado santuuq yar oo suuf ah, ku dabool kuna kala jiid jihooyin kala duwan.
Ka bilaabidda xarunta, ku dheji guluub khafiif ah. Dhexdhexaadinta - 10-12 cm, dhexroorka - 2 mm.
Isku duub qaloociyaha kala badh oo kala badh labada dhinacba.
Sidaa darteed, waxaad yeelan doontaa tartan aad u cufan si aaney u leexin isla markaana, isla mar ahaanteed, jilicsanaan maaha inaad dhaawacdo nudaha jilicsan ee kanaalka dhegta.
Waxaa jira hab kale oo lagu dhigi karo:
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daboolo duufka caanaha ah ee cadayga ama qoob-ka-leexsiinta qaabka loo helo si loo helo calan-gal ah oo ah qaabka furan ee leh dherer ahaan 3-4 cm.
Kadibna waad soo qaadan kartaa cadayga oo isku day inaad xirto tampon-ka keena ee xiran si uusan u dillaacin.
Sidee loo sameeyaa suufka?
Qaado hal suuf ah oo u kala qaybso laba qaybood.
Qalbig kasta u geli guntimaha cabbirka saxda ah.
Caloosha oo ka samaysan suufka ayaa si sahlan u dhaqsaha badan, sababtoo ah waxay daaqada hoos u dhigtaa oo ay yareysaa marka loo eego suufka caadiga ah. Maqaarka jaakada ee ilmaha waa inuusan ka badnaan 3-5 mm.
Sida loo sameeyo badeeco faashad ama faashad ah?
Iska yaree gabal 12-15 cm dheer iyo 1 sm oo ballaaran.
Ku dhaji cidhifyada strips si taxadar leh si aan dibadda u dhejin.
Qaado faashad cidhifyo ka soo horjeeda iyo boog.
Isku laab qaybta iyo isku dhejinta wadarta soo-jeedinta.
Xayawaanno faashad iyo faashad ayaa cufan oo caddaalad ah., sidaas darteed ayaa door biday carruurta yaryar.
Sidee loo isticmaalaa iyo inta xajmi karta?
Ka hor inta aanad isticmaalin calamadda caleenta ama calafka, waa lagama maarmaan in la nadiifiyo dhegta dhegta laga soo bilaabo dhegaha (sulfur plugs). Tan waxaa loo isticmaalaa saddex boqolkiiba hal hydrogen peroxide.
Ku rid 4-5 dhibcood oo ah peroxide dhegtaada oo jiifso ilaa 10 daqiiqo.
Madaxaaga madaxa si tartiib ah u soco.
Hoos ka xaji kariifka caarada leh ee leh burooyinka suufka.
Codso 5-6 dhibcood oo kuleyliya (biyo dhar ah) si heerkulka jidhka ee alkol boric on the turunda.
Calanka caloosha ku rid dhegta adoo isticmaalaya dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn, halka caarada tartanka waa inay ahaataa meel banaanka ah.
Ciribtirka guntada dhegta ilaa 2-3 saacadood ilaa gebi ahaan qalalan.
Dhamaadka qalliinka, ka saar boogta dhegta. Haddii ay jirto baahi loo qabo in laga soo saaro haraadiga xalka ka soo duuban dhegta leh suufka qalalan ee qalalan.
Tirada nidaamkan - laba ama saddex jeer maalintii iyo hal mar habeen dhan. Wareegga u dhexeeya habraaca maalinlaha ah maaha wax ka yar 5 saacadood.
Muddada daaweynta maaha wax ka badan 7 maalmood.
Maqnaanshaha natiijooyin waxtar leh, hubi inaad la tashato dhakhtar.
Turunda ee dhegta waa in ay ahaato mid aad u fog, wax yarna taabashada xuubka. Waa mamnuuc in calanka alwaaxdu aad u qulqulo, marka lagu daro, inuu ku rito. Laguma talin in dawo aad u badan la dhigo suufka.
Haddii aad isticmaasho faashad faashad ama faashad, markaa waxa fiican inaad ku rido dhegta, adoo isticmaalaya cirbadaha nadiifka ah. Xaqiiqdu waxay tahay in calanka borotiinka lagu qooyey boric acid uu noqdo mid aad u jilicsan, iyo hordhaca gelitaanka godka dhagaha ayaa ah mid aad u adag. Sidaa daraadeed, aalkolada borotiinka ah ee kulul waxaa la isku mariyaa tuubo hore loo geliyay.
Marka lagu daro khamriga borotiigga saafiga ah markaad isticmaasho turunda, waxaad isticmaali kartaa isku dar ah glycerin. Tan waxaa loo samayn karaa laba siyaabood.
Isku qaso glycerin diirimaad leh iyo cabbitaanka alkol borotiinka. Xalka ka dhashay waxaa loo isticmaalaa in lagu qasbo tampons.
Mashruuca Moisten ayaa marka hore la cabbira khamriga borotiinka, ka dibna isla qiyaasta glycerin. Tallaabooyin dheeraad ah - sida ku xusan tilmaamaha kor ku xusan.
Iyada oo isticmaalka saxda ah ee boric acid, saameynaha ayaa aad u yar., tusaale ahaan, sababtoo ah dulqaadka shakhsi ahaaneed. Hase yeeshe, khaladku (xad dhaafka), isticmaalka muddada fog ee aan la xakameynin ee alkol boric, shuruudaha soo socda ayaa suurtagal ah:
Cudurka foosha, shubanka;
xanuunada beerka ama kelyaha;
Xaalad murugo leh.
Calaamadaha ugu yar ee cawaaqibta noocan oo kale ah waa in ay joojiyaan isticmaalka daroogooyinka boric acid isla markaana u tagaan dhakhtar.
Waa maxay tallaabooyinka kale ee loo qaado si loo daaweeyo xubnaha maqalka?
Seddex boqolkiiba khamriga ah ee boric acid ayaa loo arkaa inkasta oo waxtar leh, laakiin horay loo daweeyay cudurada dhegta.
Xaaladaha qaarkood, halkii laga bedeli lahaa qamriga boricmaalka, waxaan u isticmaalnaa chloramphenicol ama furasilin alkumida si loo qoyno qulqulka. Go'aanka ku saabsan tallaabooyinka dheeraadka ah ee daaweynta otisku waxay qaadataa takhtar. Otorhinolaryngologist ayaa magacaabi karta:
dhegta ayaa ku dhacda daawada antibiyootikada penicillin, amoxycillins;
xanuunka foosha keena ee lidocaine;
daawooyinka anti-bararka - prednisone, dexomethasone, iyo sidoo kale daawooyinka aan anti-inflammatory ahayn ee nonsteroidal;
xal iodine iyo nitrate silver 40% - sida habka loo xajiyo xuubka xuubka, haddii uu jiro dillaacid;
fiisiyo-daaweynta (UHF, electrophoresis).
Inkasta oo ay fududahay iyo wax ku oolnimada ku filan ee isticmaalka turu leh alkol boric, habkani waxaa badanaa loo adeegsanayaa kaalmeyn ku saabsan daaweynta cudurrada ENT. Waa muhiim inaad ogaato taas daaweynta cudurrada dhegta waa in ay ahaato mid dhamaystiran iyo isticmaalka mid ka mid ah nidaamyada ma xaqiijin karo soo kabashada dhammeystiran. Calaamadaha ugu horreeya ee raaxo la'aanta waa inay la tashadaan takhtar. Ha iloobin khatarta nafsad ahaantaada.